साबित्री पौडेल अर्थात् चट्टान फोडेर उम्रिएको पीपल | Suvadin !
साबित्री पौडेल अर्थात् चट्टान फोडेर उम्रिएको पीपल
साबित्रीको अध्ययन–अनुसन्धानप्रतिको मोह र आत्मविश्वास चाहिँ उनी हकिङजस्तै सफल शोधकर्ता बन्न सक्छिन् भन्ने संकेत हुन्। दृष्टिविहीन विद्यार्थी साबित्री सुक्ष्म ढंगले समाजलाई बुझ्ने अठोटका साथ अघि बढिरहेकी छिन्। अध्ययनलाई जीवनको एक अंग मानेकी उनी घण्टौंसम्म पढेर बिताउने गर्छिन्। उनको अध्ययनको शैली अलग छ। शारीरिक रुपमा पनि उनको पहिचान फरक छ। यति हुँदा–हुँदै पनि साबित्री ‘चट्टान फोडेर उम्रिएको पीपल’ हुन्।
Former Editor at Suvadin
Apr 23, 2018 17:37
3.5k 67 0
Shared: 472 times | Share this on
काठमाडौं, १० वैशाख – विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टेफन हकिङको शरीर चल्दैनथ्यो। उनी हिँडडुल गर्न सक्दैनथिए। उनलाई एउटा विशेष किसिमको ह्विलचियर प्रदान गरिएको थियो, जसको सहायताले उनी आफूलाई उभ्याउन सक्थे। शारीरिक रुपमा सक्रिय जीवन जिउन नपाएपनि हकिङले आफ्नो खोजलाई निरन्तरता दिए। ह्विलचियरकै सहारामा उनले विश्व–ब्रम्हाण्डका विषयमा नौलो वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिए।
हो, मानिसको इच्छाशक्तिभन्दा ठूलो अरु केही हुन सक्दैन भन्ने प्रमाण हकिङले गरेको खोजको सार्थक प्रयासबाट पुष्टि हुन्छ। भविष्य कसैले देखेको छैन। तर, संकेतहरु चाहिँ प्रष्ट हुन्छन्। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेझैँ सिन्धुपाल्चोक स्थायी घर भएकी साबित्री पौडेल पनि त्यस्तै सम्भावना बोकेकी युवा विद्यार्थी हुन्। वैज्ञानिक हकिङसँग धेरै कुरामा असमानता हुन सक्छ।
तर, साबित्रीको अध्ययन–अनुसन्धानप्रतिको मोह र आत्मविश्वास चाहिँ उनी हकिङजस्तै सफल शोधकर्ता बन्न सक्छिन् भन्ने संकेत हुन्। दृष्टिविहीन विद्यार्थी साबित्री सुक्ष्म ढंगले समाजलाई बुझ्ने अठोटका साथ अघि बढिरहेकी छिन्। अध्ययनलाई जीवनको एक अंग मानेकी उनी घण्टौंसम्म पढेर बिताउने गर्छिन्। उनको अध्ययनको शैली अलग छ। शारीरिक रुपमा पनि उनको पहिचान फरक छ। यति हुँदा–हुँदै पनि साबित्री ‘चट्टान फोडेर उम्रिएको पीपल’ हुन्।
प्लस–टुमा ७७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेकी छिन् साबित्रीले। पुस्तकको अभावका बावजुद साबित्रीले अध्ययनमा आफूलाई सधैं अब्बल दर्जाको विद्यार्थीका रुपमा प्रस्तुत गरिरहिन्। एसएलसीअघिको पढाईका क्रममा ६०–७० जना विद्यार्थीमा उनी प्रायः उत्कृष्ट ५ देखि १० सम्म पर्ने गर्थिन्।
६ वर्षको उमेरदेखि होस्टलमा
सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–१ मा वि.सं. २०५५ साल असार २९ गते साबित्री पौडेलको जन्म भएको हो। आमा जुनमाया र बुवा नारायणप्रसाद पौडेलकी कान्छी छोरी हुन् साबित्री। उनका एक दाजु र एक दिदी छन्। साबित्रीको जीवन संघर्षपूर्ण छ। उनी दृष्टविहीन हुन्। तर, त्यो शारीरिक कमजोरको चुनौतिलाई उनले सहजै स्वीकार गरेर अघि बढिरहेकी छिन्।
साबित्रीले बाल्यावस्थामा घरमा जति सुनेर सिकिन्, स्वविवेकले अध्ययन गरिन्, उनी काठमाडौं आएपछि त्यो अध्ययनको दायरालाई दोब्बर पारिन्। कीर्तिपुरस्थित लेबोरेटरी स्कूलमा कक्षा २ देखि १० सम्म अध्ययन गरिन्। वि.सं. २०६३ सालमा उनी उक्त स्कूलमा भर्ना भएकी थिइन्। त्यसअघि वि.सं. २०६१ सालबाट २ वर्ष उनले ब्रेललिपीको आधारभूत ज्ञान हासिल गरिन्।
एसएलसी परीक्षामा साबित्रीले ८४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेकी थिइन्।
प्लस–टुमा नेपालकै सर्वोत्कृष्ट
एसएलसीपछि काठमाडौंको सिनामंगलस्थित ब्रिजवाटर इन्टरनेशलन कलेजमा अध्ययनका लागि पुगेकी साबित्रीले आफ्नो अध्ययन क्षमता प्रमाणित गरिन्। ब्रिजवाटरको शैक्षिक वातावरणले पनि उनलाई अघि बढ्न थप हौस्याएको थियो।
प्लस–टुमा साबित्रीले समग्रमा मुलुकको दोश्रो उत्कृष्ट विद्यार्थीका रुपमा आफूलाई उभ्याइन्। छात्रातर्फ नेपाल प्रथम भएकी साबित्री समग्रमा चाहिँ नेपाल दोश्रो भएकी हुन्।
‘मलाई कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पनि अध्ययनमा आफूलाई लगाउनु छ, केही सिक्नु छ,’ साबित्रीले शुभदिनसँग भनिन्, ‘मिहेनत गरेपछि त्यसको प्रतिफल अवश्य पनि हासिल हुन्छ नै।’
साबित्रीको अध्ययन क्षमता र स्मरणशक्ति देखेर शिक्षकहरु पनि उनलाई निरन्तर हौसला प्रदान गर्थे। उनका अनुसार ब्रिजवाटरमा शुरुवाती दिनमा पढाई समस्या होला कि भन्ने चिन्ता शिक्षकहरुले व्यक्त गरेका थिए। ‘तर, फर्स्ट टर्म एक्जामपछि सरहरु पनि उत्साहित हुनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘मुख्य समस्या पुस्तककै थियो, त्यसलाई पार गरेँ, कहिले अडियो सुनेर, कहिले साथीलाई आग्रह गरेर पनि मैले अध्ययन गरेकी छु।’
धेरै चुनौतिलाई पार गर्दै साबित्री अध्ययनको यात्राअघि बढाइरहेकी छिन्। उनको अध्ययन क्षमता अत्यन्त राम्रो भएको बताउँछन् शिक्षकहरु पनि। ‘साबित्री मेधावी छात्रा हुन्, एक पटक सुनेको कुरा सहजै स्मरण गर्नसक्ने र सिर्जनशील अध्ययनमा विश्वास राख्ने उनको बानीबाट म पनि प्रभावित छु,’ ब्रिजवाटर इन्टरनेशनल कलेजका प्रिन्सिपल एवं सिइओ सन्दीप खनालले शुभदिनसँग भने, ‘शारीरिक अपाङ्गताले मानिसको इच्छाशक्तिलाई प्रभाव पार्न सक्दैन भन्ने उदाहरण साबित्रीलाई हेरे पुग्छ।’
‘कहिलेकाही परीक्षाको ३–४ दिन अगाडि मात्रै पुस्तक पाइन्थ्यो, फेरि म आफैँ लेख्न पाउँदिनथेँ, सहयोगीको भरमा परीक्षा लेख्दा सहज हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्राविधिक कारणहरुले पनि मैले सोचेजति गर्न सकेको छैन।’
चट्टान फोडेर उम्रिएको पीपल
६ वर्षका कलिलो उमेर। आमाबुवाको प्यारो काख र स्नेह। तर, साबित्री ६ वर्षको उमेरमा केही सिक्न भनेर निस्किन्। उनी होस्टलमा बस्न थालिन्। जहाँ उनका आफ्ना कोही थिएनन्। तर, बस्दैजाँदा सबैकी प्रिय भइन् साबित्री।
अध्ययनलाई अघि बढाउन पनि कुनै कसर बाँकी राखिनन् उनले। ‘कहिलेकाही परीक्षाको ३–४ दिन अगाडि मात्रै पुस्तक पाइन्थ्यो, फेरि म आफैँ लेख्न पाउँदिनथेँ, सहयोगीको भरमा परीक्षा लेख्दा सहज हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्राविधिक कारणहरुले पनि मैले सोचेजति गर्न सकेको छैन।’
अनेक बाधा छन्, त्यसैले साबित्री अघि बढ्न प्रेरित भइरहन्छिन्। उनलाई संघर्षबाटै स्थापित हुनु छ। यात्रा अलि असहज होला। तर, उनी सफलतातर्फ उन्मुख छिन्।
मानिसको पहिलो पाठशाला परिवार हो। र, पहिलो शिक्षक अभिभावक हुन्। साबित्री पौडेलले पनि अध्ययन अघि बढाउन परिवारको महत्वपूर्ण साथ र सहयोग पाइरहेकी छिन्।
शिक्षकहरुबाट कक्षामा रहँदा पाउने हौसला र अभिभावकबाट पाउने उत्प्रेरणा साबित्रीका लागि मार्गदर्शनजस्तै भएका छन्। ‘मानिसलाई गरिने व्यवहारबाट पनि आगामी बाटो तय हुँदोरहेछ,’ उनको अनुभव छ, ‘मैले सधैँ नर्मल व्यवहारको अनुभूति पाएर पनि यो सम्भव भएको हो।’
समाजमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिको दृष्टिकोणमा धेरै हदसम्म फरक आइसकेको साबित्री बताउँछिन्। अधिकांश नागरिकमा सचेतना आएकाले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अचेल राम्रो व्यवहार गर्न थालिएको उनको धारणा छ।
‘हो, समाज भनेकै एकले अर्कालाई सहयोग आदानप्रदान गर्न बनेको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘शारीरिक कमजोरीकै कारण कसैप्रति दुराशय राख्नुहुन्न भन्ने सोच नेपाली समाजमा विकास भइसकेको छ।’
परिवारका सबै सदस्यले साबित्रीलाई सहयोग गर्ने गरेको उनी बताउँछिन्। आमाबुवा र दाजुदिदीले कुनै किसिमको समस्या हुन नदिएको उनले सुनाइन्। ‘पढाईका सन्दर्भमा समाजले भन्दा अभिभावकले चाहिँ बुझ्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘नेपालमा कतिपय व्यक्ति शारीरिक कमजोरीका कारण घरबाट बाहिर निस्किन पाउँदैनन्, यो अवस्थाले व्यक्तिमा भएको सिर्जनशीलता गुम्न पुग्छ।’
पढाईमा जेहेन्दार छात्रा साबित्री बिहान आफैँ कलेज आउँछिन्। जाँदा पनि उनलाई साथी चाहिँदैन। गाडीमा चढ्न–ओर्लिन पनि उनी आफैँ सक्षम भइसकेकी छिन्। आफ्ना व्यक्तिगत काम पनि साबित्री आफैँ गर्छिन्। घरका साधारण काम पनि उनी आफैँ नै गर्छिन्।
आफैँ कलेज आउँछिन्, गाडी चढ्न पनि समस्या छैन
साबित्री पौडेल अहिले स्नातक तहको अध्ययन गर्दैछिन्। उनी माइतीघरस्थित सेन्ट जेभियर्स कलेजमा अध्ययनरत छिन्। सोसियल वर्क विषय लिएर पहिलो सेमेस्टरमा अध्ययनरत उनी पहिलो आन्तरिक परीक्षामा पनि प्रथम भइन्।
साबित्री पौडेल विशिष्ठ क्षमता भएकी विद्यार्थी हुन्। अध्ययनसँगै उनी लेखनमा पनि रमाउने गर्छिन्। गजल, मुक्तक, निबन्ध आदि लेखनमा उनी सक्रिय छिन्। विभिन्न शीर्षकमा भएका निबन्ध प्रतियोगितामा उनले उपाधि जितेकै हुन्छिन्।
ऐतिहासिक पुस्तक तथा उपन्यास अध्ययनमा पनि साबित्रीको रुची छ। पत्रपत्रिका मोबाइलको सहायतामा आफैँ पढ्छिन्। देश–विदेशका खबरहरुबारे सधैँ अपडेट रहन्छिन्। मोबाइल तथा कम्प्युटरमा अध्ययन गर्ने उनले बताइन्। अंग्रेजी तथा नेपाली उपन्यासहरुको अध्ययन गर्न प्रविधिले सहज बनाएको साबित्रीले उल्लेख गरिन्।
साबित्रीले समाजको रुपान्तणमा योगदान दिने लक्ष्य बनाएकी छिन्। उनी भन्छिन्, ‘सरकारी सेवामै प्रवेश गर्ने योजना छ, राज्यको उपल्लो निकायमा पुगेर नीति निर्माण तथा सुधारका कार्यहरु अघि बढाउने लक्ष्य छ।’
सामाजिक रुपान्तरणमा लाग्ने लक्ष्य
मेधावी छात्रा साबित्री पौडेलले भविष्यको लक्ष्य पनि निर्धारण गरिसकेकी छिन्। उनले समाजको रुपान्तणमा योगदान दिने लक्ष्य बनाएकी छिन्। उनी भन्छिन्, ‘सरकारी सेवामै प्रवेश गर्ने योजना छ, राज्यको उपल्लो निकायमा पुगेर नीति निर्माण तथा सुधारका कार्यहरु अघि बढाउने लक्ष्य छ।’
चिकित्सकको गल्तीका कारण १६ वर्षको उमेरमा दृष्टि गुमाएकी सृष्टि केसीबाट उनी प्रभावित छिन्। शारीरिक कमजोरीलाई नै बोझको रुपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै साबित्रीले परिवारको साथ, शिक्षकको प्रेरणा र समाजको सकारात्मक उर्जा भए जस्तोसुकै समस्या भएपनि मानिस सफल हुने प्रष्ट पारेकी छिन्।